I-Apple iza kuphehlelela uhlelo olukhethekileyo lwe-AirTag eJapan ngoJanuwari 2022 | Ndisuka kuMac
I-Apple iza kusungula uhlelo olukhethekileyo lwe-AirTag eJapan ngoJanuwari ka-2022
UManuel Alonso | | Ezahlukeneyo
I-Apple ngamanye amaxesha ikhupha iintlelo ezikhethekileyo zezinye izixhobo zayo ngenxa yeziganeko ezikhethekileyo. Ityala elikhoyo sesinye sezo ziganeko. Kwinyanga ezayo eJapan baya kubhiyozela unyaka omtsha kwaye ngenxa yeso sihlandlo baya kusungula uluhlu olukhethekileyo lwe-AirTags. Kakade ke, olu hlelo lukhethekileyo luya kwamkelwa abo bathenga iphone. Kwaye akuyi kubakho kubo bonke abathengi, ke kuya kufuneka ukhawuleze umsitho.
U-Apple ubhengezile inkuthazo entsha yokubhiyozela uNyaka oMtsha waseJapan. Inkampani iya kubonelela ngezibonelelo ezikhethekileyo kubathengi baseJapan ngoJanuwari 2-3. I-Apple iya kunika abathengi ikhadi lesipho ngokuthengwa kweemveliso ezikhethiweyo, kodwa abathengi bokuqala abangama-20.000 abathenga i-iPhone efanele ukukhuthazwa, uya kufumana uhlelo olulinganiselweyo lwe-AirTag. Njengoko kukho iiyunithi ezingama-20.000 zolu hlobo lwesixhobo esikhethekileyo, sinokucinga ukuba ziya kuba lula ukuqokelelwa.
Uhlelo olutsha olulinganiselweyo lwe-AirTag lubhiyozela nge ingwe ekhethekileyo i-emoji inophawu olushicilelwe kuyo. Ayisiyonto encinci, kuba unyaka wama-2022 ngunyaka wehlosi. Ukufumana enye yezi AirTags, abathengi kufuneka bathenge i-iPhone 12, i-iPhone 12 mini, okanye i-iPhone SE nge-2 kaJanuwari okanye nge-3 eJapan.
Ngokuphathelele ikhadi lesipho esithethe ngalo, iya kuba nezixa ezahlukeneyo kuxhomekeke kwinto ethengiweyo. Ngaloo ndlela ukuba uthenga i-iPhone 12, i-12 mini okanye i-SE, ufumana ikhadi elixabisa i-6,000 yen. Kwezinye ii-AirPods, ii-AirPods Pro, okanye ii-AirPods Max, unokufumana ikhadi elixabisa ukuya kuthi ga kwi-9,000 yen. Apple Watch Series 3 okanye SE, ungafumana ikhadi elixabisa 6.000 yen. IiPros zamva nje ze-Apple iPad zingakufumanela ikhadi lesipho elixabisa i-12.000 yen. I-Apple ikwabonelela ngekhadi lesipho ukuya kuthi ga kwi-yen ye-24.000 ngokuthengwa kwezinye iiMacs.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Apple iza kusungula uhlelo olukhethekileyo lwe-AirTag eJapan ngoJanuwari ka-2022
Izigidi zeenkuthazo kwi-Apple ukuba ziyeke "ukukhupha" italente
I-Apple ikhupha uHlelo olulinganiselweyo Ibetha i-Studio Buds ukuBhiyozela uNyaka oMtsha waseAsia